DeAnna Cummings wuxuu ku biiray McKnight bishii Juun 2020 sidii Barnaamijka farshaxanka agaasime. Waxaa lagu asaasay aaminaada ah in Minnesota ay sii wanaagsanaato markii farshaxannadeedu ay barwaaqoobaan, McKnight wuxuu maal gashaa fanka iyo waaxaha kale si uu u taageero farshaxanka gobolka u shaqeeya una doodo qiimaha shaqadooda.
Isku soo wada duuboo waa isku shaandhayn oo waxaa loo adeegsaday madaxa fulinta ee Farshaxanada isboortiga (JXTA), waa ganacsi shirkadeed bulsho oo kuyaal woqooyiga Minneapolis oo tababaro una shaqaaleysiiya dhalinyaro taariikhi ah oo aan la qiyaasi karin inay yihiin guga loo maro waxbarashada sare iyo xirfadaha farshaxanka iyo naqshada. Waxaa lagu aasaasay 1995 barnaamij barnaamij dugsi kadib ah oo ku yaal 'North Side's Sumner-Glenwood', Waqooyiga JXTA wuxuu noqday mid ka mid ah xarumaha dhaqanka ee ugu muhiimsan Magaalooyinka Mataanaha ah.
Kahor jahwareerka JXTA, Cummings wuxuu u shaqeeyey sarkaal barnaamij barnaamijka Golaha Fanka ee Magaalo Weyn iyo sidoo kale maamule sare oo kawnsalka ah oo ka soo jeeda Gobolka Minnesota ee Madowga ah, tan iyo markii loo magacaabay Golaha Minnesota ee Dhaxalka Afrikaanka.
Astaamaha Soo Baxayaasha DeAnna Maarj 2020